Samsung Galaxy Watch3ကို တွေ့ခွင့်ရတော့မှာလား ?? — Anycall Mobile
By Thet Htun Zaw July 7, 20202Mins Read
Smart ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ Smart Watch တွေရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍက စိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းလာပါပြီ။Smart Watch လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ ပိုများလာတဲ့အချိန်မှာ Samsung ရဲ့ Galaxy Watch Series တွေဟာ လူအတော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။
အခုတော့ Samsung ကနေ အသစ်ထွက်လာမယ့် Galaxy Watch3အကြောင်းကို Samsung ရဲ့ Support Page တွေကနေ တစ်စွန်းတစ်စသိနေရပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁)လတုန်းကလည်း My Smart Price ကနေ သတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့အပြင် အခုဆို Samsung ရဲ့ ကိုရီးယားနဲ့ အိန္ဒိယ Support Page တွေမှာလည်း ဖော်ပြလာပြီဆိုတော့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ထွက်လာတော့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ လာမယ့် ဩဂုတ်လ (၅) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် Samsung Unpack ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ထွက်လာမယ့်ပုံပါပဲ။
Phone Arena ဝက်ဘ်ဆိုက်ကတော့ Samsung Galaxy Watch3တွေကိုလာမယ့် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ Support Page တွေမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်းဆိုရင် Watch ရဲ့ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားက 1.2 inch နဲ့ 1.4 inch ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိမှာဖြစ်ပြီး သတင်းတွေအရဆိုရင် ဒီတစ်ခေါက်မှာ Samsung က မိတ်ဆက်မယ့် ထုတ်ကုန်အသစ်တွေက ၉မျိုးထက်မနည်းရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီထဲက ၂မျိုးကတော့ အခုသတင်းထွက်လာတဲ့ SM-R845F နဲ့ SM-R850 တွေပါပဲ။ R845F က 45mm LTE ဗားရှင်းဖြစ်ပြီး R850 ကတော့ 41mm Wi-Fi ဗားရှင်းဖြစ်မယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Samsung အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ Smart Watch အသစ်တွေကို ယောက်ျားလေးရော မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ Size ၂မျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပုံပါပဲ။
June လတုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ သတင်းအချို့အရတော့ Galaxy Watch3ရဲ့ Software Feature‌ တွေအကြောင်း အနည်းငယ်သိထားရတာလေးတွေ ရှိထားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ User တွေအနေနဲ့ Watch Face ကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျပြင်နိုင်တာမျိုး (ဥပမာ – နှလုံးခုန်နှုန်း၊ ခြေလှမ်းတွေနဲ့ ရာသီဥတုအချက်အလက်တွေကို Watch ရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ ကိုယ်ကြိုက်သလို ထည့်တာ ဖြုတ်တာမျိုး ) လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကတော့ User တွေအနေနဲ့ နာရီတစ်လုံးကို ကိုယ်ကြိုက်သလို ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Samsung အနေနဲ့ Microsoft နဲ့ Partnership ချိတ်ထားပြီး မိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက် အခု Watch3မှာ Gmail မပါတော့ဘဲ Microsoft ရဲ့ Outlook Mail ပဲ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ Galaxy Watch3ဟာ Original Galaxy Watch မှာသုံးထားသလို Bezel ကွင်းလေးတွေ လှည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုး သတင်းတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ အဲဒီ ဒီဇိုင်းကို Galaxy Watch Active2တွေမှာ Samsung က မသုံးပေးထားခဲ့ပါဘူး။ အခုဆို Galaxy Watch3နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံတွေကိုလည်း တော်တော်များများ ဖော်ပြထားကြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်လိုပုံစံ ဘယ်ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ ပုံလေးတွေမှာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်
Galaxy Watch3လည်း ထွက်ဖို့အချိန်သိပ်မကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ Samsung ဘက်ကနေ ဒီ Smart Watch မှာ ဘာတွေထပ်ပြီး ထည့်ပေးဦးမလဲ ဘယ်လို စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတွေ ထပ်ထွက်လာဦးမလဲဆိုတာကိုတော့ အတော်လေး စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ အခု သိထားရသလောက် Galaxy Watch3ရဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာ Function တွေကို သဘောကျတဲ့ Samsung Watch Fan တွေ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ထွက်လာမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြတဲ့ ဇူလိုင်လ (၂၂) ရက်နေ့ကို အတူတူရင်ခုန်ရင်း စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Ref : androidheadlines
Author Thet Htun Zaw
အကြမ်းကြီးတေ‌ွလုပ်ပြဦးမယ့် Samsung Galaxy Note 20 Series ထွက်လာပြီ..
OnePlus Nord နဲ့ ယှဉ်ဖိုက်လာမယ့် POCO ဖုန်းတစ်လုံးထွက်လာတော့မှာလား??
Xiaomi Mi 10 Ultra ထွက်လာတော့မယ်…
Google ကမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Nearby Share for Android ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ??
Mate 40 နဲ့ Mate 40 Pro တို့ရဲ့ပံု‌ေတွ ထွက်ပေါ်လာပြီ…